software yekuvandudza hupenyu kutenderera - sdlc
Kuru Qa Software Yekuvandudza Hupenyu Hupenyu - SDLC
Software Yekuvandudza Hupenyu Hupenyu, kana SDLC maitiro anoshandiswa kugadzira software. Kune akasiyana matanho kana zvikamu mukati meiyo software yekuvandudza hupenyu kutenderera uye muchikamu chimwe nechimwe, zviitiko zvakasiyana zvinoitika.
SDLC inogadzira chimiro chemakambani ekuvandudza anokwanisa kugadzira, kugadzira uye kuburitsa yakakwira mhando software nekutsanangura mabasa akasiyana siyana anofanirwa kuitika Hupenyu hwekutenderera hunotsanangura nzira yekuvandudza mhando yesoftware uye nehurongwa hwese hwekuvandudza.
Chinangwa cheSDLC inoitisa kuti ibatsire kugadzira chigadzirwa chinodhura, chinoshanda, uye chemhando yepamusoro.
1. Zvinotarisirwa Kuongorora
Iyo Software Yekusimudzira Hupenyu Kutenderera inotanga nechinodiwa chikamu chekuongorora, uko ivo vane chekuita vanokurukura zvinodikanwa zve software iyo inoda kugadziridzwa kuzadzisa chinangwa. Chinangwa chechikamu chekuongorora chinodiwa ndechekutora iwo ruzivo rwechimwe nechimwe chinodiwa uye kuve nechokwadi chekuti munhu wese anonzwisisa kukura kwebasa uye kuti chidimbu chega chega chicha zadzikiswa sei.
Iyo tsika yakajairika yekukurukura zvakare kuti chimwe nechimwe chinodiwa chichaedzwa sei uye saka vaedzo vanogona kuwedzera kukosha kukuru mukutora chikamu mumisangano yekuongorora inodikanwa.
Zvichienderana nekuti ndeipi software yekuvandudza nzira inoshandiswa, nzira dzakasiyana dzinotorwa mukufamba kubva kune chimwe chikamu kuenda kune chimwe. Semuenzaniso, mumupopoma kana V modhi, chikamu chinodiwa chekuongorora chinochengetwa mugwaro reSRS (Software Requirement Specification) uye rinoda kupedziswa chikamu chinotevera chisati chaitika.
Chikamu chinotevera cheSDLC chikamu cheKugadzira. Pakati pechikamu chekugadzira, vagadziri uye vagadziri vehunyanzvi vanotanga iyo yepamusoro-chikamu dhizaini yesoftware uye system kuti vakwanise kuendesa yega yega inodikanwa.
Hunyanzvi hwedhizaini hunokurukurwa nevanobata pamwe nematanho akasiyana senjodzi, matekinoroji anoshandiswa, kugona kwechikwata, zvipingamupinyi zvepurojekiti, nguva uye bhajeti zvinoongororwa uyezve nzira yekugadzira yakasarudzika inosarudzwa pachigadzirwa.
Iyo yakasarudzwa dhizaini dhizaini, inotsanangura zvese zvinhu zvinoda kugadzirwa, kutaurirana neyechitatu bato masevhisi, inoyerera mushandisi uye database yekutaurirana pamwe nekumberi-kumagumo mamiririro uye maitiro echinhu chimwe nechimwe chezvinhu. Iyo dhizaini inowanzo chengetwa muKugadzira Tsananguro Gwaro (DSD)
Mushure mekuti zvinodiwa uye dhizaini yekupedzisa zvapera, chikamu chinotevera cheSDLC ndiko kuita kana kusimudzira kwesoftware. Muchikamu chino, vagadziri vanotanga kukodha maererano nezvinodiwa uye dhizaini inokurukurwa muzvikamu zvakapfuura.
Dhatabhesi admins inogadzira iyo inodiwa dhata mune dhatabhesi, kumberi-kumagumo vanogadzira vanogadzira inodiwa maficha uye GUI yekudyidzana neshure-kumagumo zvese zvinoenderana nemirau uye maitiro anotsanangurwa nekambani.
Vagadziri vanonyora bvunzo dzeyuniti yechinhu chimwe nechimwe kuyedza kodhi nyowani yavakanyora, kuongorora imwe kodhi yemumwe nemumwe, kugadzira kuvaka uye kuendesa software kune nharaunda. Uku kutenderera kwekuvandudza kunodzokororwa kudzamara zvido zvasangana
Kuyedza chikamu chekupedzisira cheiyo software yekuvandudza hupenyu kutenderera software isati yaendeswa kune vatengi. Munguva yekuyedza, vaedzo vane ruzivo vanotanga kuyedza iyo system vachipesana nezvinodiwa.
Iwo ma testers ane chinangwa chekuwana hurema mukati mechirongwa pamwe nekuona kana iko kunyorera kuchiita sezvanga zvichitarisirwa uye zvinoenderana nezvakanyorwa muchikamu chekuongorora chinodiwa.
Vanoedza vanogona kushandisa yekuyedza script kuita bvunzo yega yega uye kuongorora mhedzisiro, kana kushandisa kuongorora kwekutsvagisa iyo iri yakawanda yechiitiko yakavakirwa nzira.
Izvo zvinokwanisika kuti hurema hunoonekwa muchikamu chekuyedza. Kamwe hurema paunowanikwa, vanoedza vanozivisa vanogadzira nezve ruzivo rwechinhu uye kana chiri chiremera chakakodzera, vagadziri vanogadzirisa nekugadzira vhezheni nyowani yesoftware iyo inoda kuongororwa zvakare.
Kutenderera uku kunodzokororwa kudzamara zvese zvinodiwa zvayedzwa uye zvese zvikanganiso zvagadziriswa uye software yacho yagadzirira kutumirwa.
5. Kuendeswa uye Kugadziriswa
Kana software yacho yaedzwa zvizere uye kwete nyaya dzakanyanya kukoshesa ramba uri musoftware, inguva yekuendesa kugadzirwa uko vatengi vanogona kushandisa system.
Kamwe kana vhezheni yesoftware yaburitswa mukugadzirwa, panowanzo kuve timu yekuchengetedza iyo inotarisira chero epashure-yekugadzira nyaya.
Kana nyaya ikasangana mukugadzirwa timu yekusimudzira inoziviswa uye zvichienderana nekuti nyaya yacho yakanyanya sei, ingangoda gadziriso inogadzirwa uye inotumirwa munguva pfupi kana kuti isina kunyanyisa, inogona kumirira kusvikira inotevera vhezheni yesoftware.
Matanho ese eiyo software yekuvandudza hupenyu kutenderera akatsanangurwa pamusoro anoshanda kune chero software yekuvandudza nzira, asi iyo nguva uye zviitiko muchikamu chimwe nechimwe zvinoenderana nekuti unoteedzera iyo V Model yekuvandudza nzira kana Agile.
MuAgile, iyo nguva yekuendesa software inoshanda kazhinji iri pakati pemavhiki maviri kusvika mana uye saka yega yega yezvikamu zviri pamusoro ipfupiswa. Zvakare mukukurumidzira, iri timu nzira inosvikira panogadzirwa nevanogadzira uye vanoedza uye vanoshanda pamwechete kugadzira chigadzirwa chemhando yepamusoro.
iphone 7 pamwe yakadzika bhuruu
iphone x kesi ine kickstand
Deal: Samsung Galaxy S7 kumucheto, nyowani uye isina kuvhurwa, iri $ 80 kubviswa paGood Buy
Pane kumhanyisa kune avo madema eChishanu Chishanu 2019 madhiri, Amazon neWalmart inoderedza Apple & apos; s Mutengo wekutarisa
10 akanakisa RPG mitambo yeApple uye iOS
AT & T yekupa yakatsemuka yekugadzirisa skrini sarudzo kana uine foni inishuwarenzi
Apple iPhone 5s vs Samsung Galaxy Cherechedzo 3
Ngwarira kukwenya: Galaxy S7, S7 kumucheto mabhatani epamba ari nyore kupwanya
T-Nhare Yakakosha vs T-Mobile YAKO: nderipi zano rakanakisa?
New iOS 14 maficha: maitiro ekuchinja Safari yeChannel seyakasarudzika browser
Checkmate, vakaroorana! Heano & maapos ekuti ungatambe sei chess neshamwari dzako muFacebook Messenger
Kunyangwe vanyori vazhinji veSpotify vanogona kuwana yemahara Google Home Mini yeKisimusi